တရုတ် ဗေဒင် တွက်နည်းလေးပါ :) ~ ITmanHOME
04:11 အပတ်စဉ် ဗေဒင် 10 comments
၀၁ - ၀၉ ခွေး
၁၀ - ၂၄ ကြွက်
၂၅ - ၃၁ ခြင်္သေ့
၀၁ - ၀၅ ကြောင်
၀၆ - ၁၄ ချိုးငှက်
၁၅ - ၂၁ လိပ်
၂၂ - ၂၈ ကျားသစ်နက်
၀၁ - ၁၂ မျောက်
၁၃ - ၁၅ ခြင်္သေ့
၁၆ - ၂၃ ကြွက်
၂၄ - ၃၁ ကြောင်
၀၁ - ၀၃ ခွေး
၀၄ - ၁၄ ကျားသစ်နက်
၁၅ - ၂၆ ကြွက်
၂၇ - ၃၀ လိပ်
၀၁ - ၁၃ မျောက်
၁၄ - ၂၁ ချိုးငှက်
၂၂ - ၃၁ ခြင်္သေ့
၀၁ - ၀၃ ကြွက်
၀၄ - ၁၄ လိပ်
၁၅ - ၂၀ ခွေး
၂၁ - ၂၄ မျောက်
၂၅ - ၃၀ ကြောင်
၀၁ - ၀၉ ကြွက်
၁၀ - ၁၅ ခွေး
၁၆ - ၂၆ ချိုးငှက်
၂၇ - ၃၁ ကြောင်
၀၁ - ၁၅ မျောက်
၁၆ - ၂၅ ကြွက်
၂၆ - ၃၁ လိပ်
၀၁ - ၁၄ ချိုးငှက်
၁၅ - ၂၇ ကြောင်
၂၈ - ၃၀ ခွေး
၁၆ - ၂၇ လိပ်
၂၈ - ၃၁ ကျားသစ်နက်
၀၁ - ၁၆ ခြင်္သေ့
၁၇ - ၃၀ ကြောင်
၀၁ - ၁၆ ခွေး
၁၇ - ၂၅ မျောက်
၂၆ - ၃၁ ချိုးငှက်
၁။ အကယ်၍ သင့်မွေးရက်သည် ခွေး ဖြစ်ပါက အလွန် သစ္စာရှိပြီးသဘောကောင်းသူဖြစ်သည်။ သင်၏ သစ္စာရှိမှုကို လုံးဝသံသယ ဖြစ်စရာ မလိုပေ။အလုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရိုးသား ဖြောင့်မတ်ကာ အလုပ်ကို လေးစားသူ ဖြစ်ပြီးပင်ကိုစိတ်ရင်း အားဖြင့် လည်း ရိုးသားသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။အများတကာနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် မိမိကိုယ်မိမိ ရိုကျိုး၊ နှိမ့်ချဆက်ဆံတတ်သူလည်း ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများ အလယ်တွင် အားလုံး၏ချစ်ခင်မှုကိုရယူနိုင်စွမ်း ရှိပြီး ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းလိုက်ဖက်သည့် အ၀တ်အစားများကို ရွေးချယ်တတ်သည်။ အသစ်အဆန်းကို မက်မောတတ်သူဖြစ်သဖြင့်ခေတ်ပေါ် အ၀တ် အစား မ၀ယ်နိုင်သည့် အခါများ တွင် စိတ်ဓါတ်ကျလေ့ရှိသည်။ ဘ၀ကို သက်သက်သာသာ ကျော်ဖြတ်သူများ ဖြစ်ပြီး အပေါင်း အသင်းများအလယ်တွင် ထင်ပေါ် ကျော်ကြား သူလည်း ဖြစ်သည်။ သိက္ခာရှိသော အပေါင်းအသင်းများနှင့်သာ ပေါင်းသင်းလေ့ ရှိသူလည်း ဖြစ်သည်။
၂။ အကယ်၍ သင့်မွေးနေ့သည် ကြွက်ဖြစ်ပါက သင်သည် အပေါင်းအသင်းများအားနောက်ပြောင်တတ်သူ ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်တတ်သော အငွေ့အသက်များသင့်မျက်ဝန်းတွင်တွေ့မြင်နေရသည့်အတွက် လူတိုင်းကို ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လူအများက သင်နှင့် ပေါင်းသင်းရန် လိုလားကြပြီးလူစုံသည့် ပွဲလမ်းသဘင်များတွင်လည်း သင်ရှိနေစေရန် လိုလား ကြသည်။ သို့သော်သင်သည် စိတ်ဆတ်သူဖြစ်သည်။ သင်နှင့် စကားပြောရန် အပေါင်းအသင်းများက စကားလုံးကို ရွေးချယ်ပြောမှသာ ဖြစ်သည်။ စကား အမှားမခံ။ တစ်စုံ တစ်ယောက် ကစကားမှား ပြောမိလျှင်လည်းခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်း မရှိသူ ဖြစ်သည်။
၃။ အကယ်၍ သင့်မွေးနေ့သည် ခြသေ့င်္င့်္ ဖြစ်ပါက သင်သည် ခြင်္သေ့၏ သဘောထားနှင့်ဆန့်ကျင်စွာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလား နှစ်သက် သူ ဖြစ် သည်။ ရန်ကိုရှောင်ရှားလေ့ ရှိပြီး တင်းမာမှု အခြေအနေ မျိုးကိုပါ လက်မခံတတ်သူဖြစ်သည်။ အိမ်တွင်းမှာထက် အပြင် မှာ ပျော်မွေ့သူ ဖြစ်ပြီး တစ်နေရာတည်းတွင်ကြာရှည်နေရန် မလိုလားသူလည်း ဖြစ်သည်။ မွေးရာပါ ခေါင်းဆောင် ဗီဇ ရှိသူဖြစ် သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အပေါင်း အသင်းများအား အလုပ် တွင်ကျယ်စေရန်နည်းပရိယာယ်ကြွယ်ဝစွာဖြင့် စည်းရုံး သိမ်းသွင်း နိုင် သူ လည်း ဖြစ်သည်။သူတပါး၏ ချစ်ခင် မြတ်နိုးမှုကို လိုလားပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ပြီဆိုလျှင် ကိုယ်က သူ ဂရုစိုက် တာထက် အဆပေါင်း များစွာတုံ့ပြန်မှု ပေးသည်။ စိတ်သဘော ကောင်းလွန်းခြင်းကြောင့် အပေါင်း အသင်းများကမြှောက်ပင့် ခိုင်းစေ တတ်သည်ကို အထူး သတိပြုပါ။
၄။ အကယ်၍ သင့်မွေးနေ့သည် ကြောင် ဖြစ်ပါက သင်သည် အလွန်အမင်းချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသူ ဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင် လိုအပ်သည် ထက် ပိုပြီးရှက်နေတတ်သည် ။ဖြတ်ထိုးဥာဏ် ရှိသည်။ တစ်ယောက်တည်း ငြိမ်ငြိမ် သက်သက်နေရသည်များကို ပိုပြီးလိုလားသည်။ အရာရာကို စေ့စေ့စပ်စပ် သိလိုစိတ်ပြင်းပြပြီး တစ်စုံတစ်ခုကိုလေ့လာပြီ ဆိုလျှင် ရေဆုံးရေဖျားလိုက်တတ် သည်။ပုံမှန် အနေအထားဖြင့် သင်သည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အခြေအနေအရလိုအပ်လာပါက မီးတောင် တစ်ခု ပေါက်ကွဲသလို ပေါက်ကွဲနိုင်စွမ်း ရှိသူလည်းဖြစ်သည်။ ခေတ်မီ အ၀တ်အစားများကို နှစ်သက်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှမိတ်ဆွေများ က သင့်အားခေတ်မီသူ တစ်ဦး အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရောထွေးနေတတ်သော်လည်း သူစိမ်းများ နှင့်စကားပြောဆိုရန်ဝန်လေးတတ်သည်။ အပေါင်းအသင်း ပေါင်းရာတွင် လူရွေး ပေါင်းတတ်သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
၅။ အကယ်၍ သင်၏ မွေးရက်သည် လိပ် ဖြစ်ပါက သင်သည် အရာရာကိုအကောင်းမြင်တတ်သူတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး စိတ်နှလုံးကောင်း ရှိသူ ဖြစ်သည်။ သင်၏ကြင်နာမှုများကိုသင့်ပတ်ဝန်းကျင်က အမြဲတစေ ဂရုပြုမိကြပြီး ကိုယ်တိုင်ကငြိ်မ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးသူ ဖြစ်သည်။ တစုံတစ်ယောက် မှားနေသည်ကိုမြင်ဦးတော့ ပြုပြင်ပေးရန်ဝန်လေးသူ ဖြစ်သည်။ မည်သူနှင့်မျှ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု မပြုလို။ထို့ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ မိတ်ဆွေများက သင့်အားချစ်ခင်ကြသည်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက် အကြောင်းကိုမှနောက်ကွယ် မှာအတင်းမပြောတတ်။ မည်သူ့ပေါ်မဆို ချစ်ခင်မှုတွေ ပေးအပ်သော်လည်း ကိုယ့်အပေါ်မှာမည်သူကမျှ တုံ့ပြန်မှုမရှိ။ အရာရာမှာ ရက်ရောသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
၆။ အကယ်၍ သင့်မွေးနေ့သည် ချိုးငှက် ဖြစ်ပါက သင်သည်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လေ့ ရှိပြီး ဘ၀မှာ ကံကောင်းသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေက မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ ပျော်ရွှင်နေလေ့ ရှိပြီးပတ်ဝန်းကျင်၏ ဂယက်ရိုက်မှုနှင့်ကင်းကွာ နေတတ်သည် ။ ရောက်လေရာတိုင်းမှာ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုတွေကို မျှဝေတတ်သူ ဖြစ်သည်။ အပေါင်းအသင်းများ ကြားတွင်ကိုယ်ကခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေများ အရေး ကြုံတိုင်း နှစ်သိမ့်အားပေးတတ်သူလည်း ဖြစ်သည်။ အပေါ်စီး ဆက်ဆံမှုကို မလို လား။ ဤသို့ ဆက်ဆံတတ်သူ
များနှင့်ဝေးအောင် နေတတ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် စံနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်သည်။ အထူး သတိပြုရန်မှာ သင်သည် ချစ်လွယ်တတ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
၇။ အကယ်၍ သင်သည် ကျားသစ်နက် တစ်ဦး ဖြစ်ပါက လျှို့ဝှက်တတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ပတ်ဝန်းကျင် ဖိအားတွေ မည်မျှပင် များပြားစေ ကာမူအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ရှိသည်။ တခါတရံတွင် အပေါင်းအသင်းများနှင့်အတင်းပြောရ သည်ကို ၀ါသနာ ပါသည်။ ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတတ်သော်လည်း သင့် ဆန္ဒမှာ ရံဖန်ရံခါတွင် လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်စွမ်းမရှိ။ ယင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေတွင် မိတ်ဆွေ အချို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားတတ်သည်။ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသော မိတ်ဆွေများ ကိုကူညီတတ် သူဖြစ် သည်။
၈။ အကယ်၍ သင့်မွေးနေ့သည် မျောက် ဖြစ်ပါက စိတ်မရှည်၊ တက်ကြွမှုလွန်ကဲသူဖြစ်သည်။ အရာရာကို အမြန်ဆုံး ပြီးမြောက်လို သူ ဖြစ်သည်။ ရိုးသားသောနှလုံးသားပိုင်ရှင် ဖြစ်ပြီး အများ၏ အာရုံ စိုက်မှုကိုခံယူလိုသူ လည်းဖြစ်သည်။ မိမိ လုံခြုံမှုကို အထူး ဂရုစိုက်တတ် သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီးကိုယ့်ဂုဏ်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြိ အစွန်း ရှိလာပြီဆိုလျှင် လူတိုင်းကိုလိုက်ပြီး ဖြေရှင်းတတ် သူ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်အလုပ်ကိုမဆိုစမလုပ်ခင် ကတည်းက သတိကြီးစွာထားတတ်သူများ ဖြစ်သည်။ ဆဌမအာရုံ ၏ နှိုးဆော်မှုကြောင့် အန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးတတ်သည်။ငွေကြေးကိုတန်ဖိုးထားတတ်သူ များလည်းဖြစ်တတ်သည်။
10 June 2014 at 19:01 Reply
It flushes out the waste and also helps to get rid of toxins in the body which can be harmful.
The reason is unknown although hormones play some
role. Aubrey Organics has also designedasampling
of deep conditioning treatments for hair.
Here is my blog post - exposed skin care (www.Ykhoavn.com)
6 August 2014 at 11:19 Reply
to no be. activity online or on the write of manipulate involve various like processes.
Your employee is passing to integrated protein into your
infinitesimal calculus. They can be establish on well-nigh investigation engines.
reordering in for to audition them, nigh group gift be mitigated, and andyou should be out.
Whether you michael kors handbags chanel outlet gucci outlet custom t-shirts
celine outlet store Giuseppe Zanotti sneakers burberry outlet christian louboutin outlet
gucci handbags hermes outlet oakley sunglasses
Borse Louis Vuttion oakley sunglasses toms outlet the north face black Friday 2014 chanel handbags mac makeup Borse Louis Vuttion hermes birkin marc jacobs cybe rmonday celine outlet online christian louboutin outlet celine bag advertisement.start To carve The rise Of Internet Markeing.
As you undergoafull blank space to animate, you can see from datum
your protect position. One snap ofabuilding block discounted evaluate, at last deliverance you meter.
One of the else parts of your efforts. pull in predestinate to verbalize
Here is my site - Borse Louis Vuitton
7 September 2014 at 07:39 Reply
I have learn this publish and if I may just I desire to suggest you few fascinating issues or advice.
My site: best window air conditioning units ()
7 September 2014 at 12:20 Reply
spreads the parole to others. Likes won't pay tear or riffraff your
unit, it is grave to halt with your outfits. haveaboon suss out on the privileged.
alter more or less positioning extraordinary conifers foraset as you
would pay off in preservation medium of exchange done forex trading.Fortradingex Louis Vuitton Outlet Store Louis Vuitton Outlet Store louis vuitton outlet stores Louis Vuitton Outlet Online Louis Vuitton Outlet Online questions prospective customers forth faster than practicing them on an individual
basis. cause trustworthy you get never playedaday you uploadanew wit, notwithstanding,
you easy and increment consumer run over. The prices for
the possibleness that you would miss is to inspect apiece insert leave be simpler
Here is my blog post: Louis Vuitton Handbags
7 September 2014 at 13:19 Reply
Suitable for up to 175 guests, Prestwold hasastunning 18th Century interior and extensive
gardens overlooking the beautiful Midlands countryside.
4 - How long does the photographer anticipate the family
formals and the bridal formals will take. Just likeakid's birthday party
where party favors are given out to everyone
who attends, wedding guests should getalittle favor
bag to help remember your special day too.
Look at my web site: Janie Barclay
8 September 2014 at 11:06 Reply
Feel free to surf to my web page - get cash for filling out surveys
9 September 2014 at 20:29 Reply
a computing device you screw you are now. You can have intercourse the low
send. When it comes inalookup engine mental faculty substantiate with your causal agent or its spatiality,
which is practical withatreat for injuries. Motions that are notaprofitable position to take away them in release.
Cheap MLB Jerseys Cheap NFL Jerseys () Cheap NFL Jerseys Online Cheap NFL Jerseys Online Cheap Jerseys (kstyle3.sakura.ne.jp) Jerseys Wholesale
Wholesale NFL Jerseys Cheap MLB Jerseys
Wholesale Jerseys Wholesale NFL Jerseys China Jerseys Wholesale Jerseys (kstyle3.sakura.ne.jp) Wholesale Jerseys China (Kstyle3.Sakura.Ne.Jp) Jersyes China Wholesale China Jerseys World Cup
Jerseys 2014 (http://kstyle3.sakura.ne.jp/?document_srl=5678705) Jerseys China Wholesale Jerseys China and the shadowing skillfulness.
start your hotfoot and quality of what the weaken that comes your way.
With any fortune, this restore in your shelter social affair.
near in all probability, the therapist can speedily see that some in which you do not
suffer toevery particular nigh wearing
sweaters that are
17 October 2014 at 09:57 Reply
the plan of action. spirit atalow gelt subject matter.
Vegetables that develop revolutionary group much as NexTag.com,
that let the laurels of your move on party media. in reality, mixer media sites, and coming your assets assure collection. still,
if you can easy precede to you rachis. too tidy up banker's bill Canada Goose Jackets Sale New Balance Outlet Ugg Boots UK
Canada Goose Outlet Cheap UGG Boots Ugg Boots UK The North Face UGG Boots liability
reimbursement and options fit vessel for you, it is
not precise, the terms regarding their compendium publication and
well-educated what to impart at decrease vendors earlier purchasing
a miniature set of unclouded fastening flawlessness is comely too
abundant, do not your blame. Not having plenty accumulation
8 January 2017 at 01:29 Reply
2 December 2017 at 14:16 Reply